Horseed iyo Jenyo Maxaa Kala Haysta Galabta – Radio Muqdisho
Horseed iyo Jenyo Maxaa Kala Haysta Galabta
Kooxda Kubada Cagta Horseed oo matasha Ciidanka Xooga ayaa Lumisay Kaalinta labaad ee kala horeynta Horyaalka Soomaaliya kadib markii barbaro ay la gashay kooxda Gadiidka oo ah kooxda ugu hooseysa kooxda ku Xigta.
Horseed ayaa liidatay bilahii ugu danbeyay horyaalka Soomaaliya ayadoo bishii april iyo March, todobo kulan oo a ciyaartay Horseed labasi bilan afar kulan ayeey qasaarisay sadex barbaro ayeey gashay hal kulan waa ay guuldareysatay kooxda Ciidanka Xooga.
Kooxda Horseed ayaa adkaatay Todobo kulan Sadex iyo Toban kulan oo ay Ciyaartay waxay gashay Shan barbaro taasi ayaana ah sababta keentay in Horseed asageed ay sare maraan barbarihii ugu danbeyay oo ay la gashay ayeey ku lumisay kaalinta labaad ee kala horeynta horyaalka Soomaaliya.
Kulamada sadex iyo tobanka ah ee haatan la ciyaaray ayaa ahaa kuwa isbadal ku riday horyaalka Soomaaliya ayadoo kooxo fara badan ay lumiyeen boosaskii ay kaga jireen liiska kala horeynta horyaalka Horseed ayaa noqotay kooxdii ugu danbeyay ee ku dhacay isbadalkii ugu danbeyay taasi oo lumisay kaalinta labaad kooxda hogaanka ay hayso ee Dekadda waxay u jirsatay tiro dhibco ah oo gaaraya afar dhibcood maadam Horseed la hakiyay.
Gadiidka guusha ay ka gaartay horsed ayaa ahayd mid ay mid aanan Isbadal ka abuurin sadexda kooxod ee ugu hooseya horyaalka dhibicda ay ka heshay horsed ayaa noqoneyso dhibicdii tobanaad oo ay uruursato kooxda Gadiidka ayadoo dhibic ay ka hooseyso kooxda Batroolka oo kaalinta 8-aad kaga jirto kala horeynta horyaalka waxaana laba dhibcood ay ka hooseysa kooxda Madbacadda oo kaalinta 7-aad kaga jirto tartanka.
Horseed kulanka soo socda waxay fooda isdari doonan kooxda Jenyo oo guuldaro kala soo kulantay hogaamiyaasha horyaalka Soomaaliya waa Dekadda oo laga adkaaday hal kulan oo quraa dhamaan kulamadii ay u Ciyareen xili ciyareedkan halka kooxda Gadiidka ay la ciyaari doonto kooxda Heegan oo matasha.
Kooxaha Horseed iyo Jenyo kulanka soo socda oo ay ciyaari doonan ayaa ka mid ah Kulamada ugu adag horyaalka Soomaaliya kulamada ay ciyaraan Lixda kooxod ee ugu tunka, Sida kooxaha Banaadir Horseed Heegan Dekadda Elman iyo Jenyo Kulamada Kooxahasi ayaa ah kuwa loogu daawashada badan yahay horyaalka Soomaaliya.
Jenyo iyo Horseed ayaa ah laba kooxod oo aad u xifaaltama kulamada ay ciyarayaan kulankii hore ama lugtii hore oo ay wada ciyareen is aragii hore ee horyaalka ayaa kooxda Jenyo waxaa looga adkaaday 2-0 ayadoo kooxda Jenyo xaaladu ay ku tahay xili ciyareedkan ayadoo kooxda Horseed oo awoodeeda sii diicafeyso-na ay ka faa,ideysan karto kooxda Jenyo Maadama Kooxda Horseed ay ku guuldareysatay in ay ka adkaato kooxda labaad ee ugu hooseyso horyaalka waloow kooxda Gadiidka ay sidoo kale garaacday Jenyo.
Kooxda Jenyo ayaa ka badis badan kooxda Horseed Sagalkii kulan ee u danbeyay oo ay wada Ciyareen hase kooxda Jenyo ma ahan Horseed-dii ay ka adkaan jirtay Sagalkii kulamadii ugu danbeyay oo ay guul gaarto kooxdaasi waayo Horseed ayaa la geliyay qarash fara badan kadib markii Maamulka kooxdaasi ay go,aansadeen in ay boorka ka jafaan kooxda Ciidanka Xooga ee Horseed Cawa iyo Maalin.
Jenyo wax guul ah ma gaarin labadii kulan ee ugu danbeyay oo ay ka hortagtay kooxda Horseed waxaana Jenyo ay kala kulantay laba guuldaro oo is xiga labadii kulan ee ugu danbeyay, Jenyo kulan ay ka adkaato horyaalka Soomaaliya Kooxd horsed waxaa ugu danbeyay Xili Ciyareedkii 2017 kolkaasi oo Jenyo hal gool ay ugu adkaatay Kooxd Horseed kulamadii ka horeyay kulankaasi ayaa kooxda Horseed waxay ku guuldareysatay in dhinaceeda dhulka ay dhigto kooxda Jenyo oo xiligaasi ay u joogan qaar ka mid ah xidigaha haatan ay ku duulan kooxaha ugu awooda badan horyaalka Soomaaliya oo ay ugu horeyso Horseed oo la wareegtay xili ciyareedkii hore Mashiinkii qadka dhexe ee kooxdaasi waa Xasaasi oo ka hor imaan doono kooxdisii hore ee Jeenyo oo kulankii kan ka horeyay markii ugu horeysay ka hor imaaday kana guuleystay.
Sagalkii kulan ee ugu danbeyay oo ay wada Ciyareen kooxaha Horseed iyo Jenyo ayaa ahaa kuwa natiijadooda hal dhinac u badneyd kulamadii ay soo Ciyareen Sadexdii xili ciyaared ee ugu danbeyay lix jeer ayeey adkaatay kooxda Jenyo kulamadaasi halka Kooxda Horseed ay adkaatay laba kulan oo quraa sagalkii kulan ee ugu danbeyay oo ay ka hortagto Horseed kooxda Jenyo hal kulan oo quraa ayeey barbaro galeen Sagalkii kulan ee ugu danbeyay.
Afhayeenka Ciidamadda Militariga ee G/Hiiraan “Waxaan dilnay 30 ka mid ahaa Maleeshiyada Al shabaab”
Wasaaradda Arrimaha Dastuurka oo biloowday Tababarka tababarayaasha ee Waxbarashada Madaniga “SAWIRRO”
Wasaaradda Arrimaha Dastuurka oo biloowday Tababarka tababarayaasha ee Waxbarashada Madaniga "SAWIRRO"